Wararka Maanta: Khamiis, Feb 18, 2021-Faahfaahin ku saabsan xaaladdihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho
Cabsi weyn ayaa laga muujinayaa in ay isku dhacaan labada ciidan, inkastoo ay socdaan dadaalo kala duwan oo looga hortagayo in ay Muqdisho lugaha la gasho rabshshado colaadeed oo haddii ay bilowdaan adag tahay in la xakameeyo.
Dadka reer Muqdisho ayaa dhegta u taagaya guuxa gaadiidka dagaalka oo lasoo dhoobay inta badan isgoysyada ugu waawayn Muqdisho. Sidoo kale wararka been abuurka ah ee lagu faafinayo baraha bulshada ayaa dadweynaha jahwareeriyay.
Salaadiinta dhaqanka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta ka sheegay in ay madaxweyne Farmaajo la kulmeen kana codsadeen inay dowladdu oggolaato mudaharaadka musharrixiinta qabsanayaan, si looga baaqsado colaad.
Waxay sheegeen in madaxweynuhu aqbalay baaqooda, islamarkaana sidoo kale ay golaha musharrixiinta la kulmeen kalana hadleen in mudaharaadkooda uu ku ekaato doonitaankooda ah in doorashada si degdeg ah loo qabto.
Warar kale oo aan helayn waxay sheegayaan in raysal wasaaruhu iskudayayo inuu musharrixiinta ku qanciyo in mudaharaadka la baajiyo ayna dowladda kala hadlayso tabashada ay ka qabaan arrimaha doorashada ee cakiran.
2/18/2021 11:14 AM EST
Khamiis, Feberaayo, 18, 2021 (HOL) - Midowga Musharixiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa galabta kormeeray taallada Daljirka Dahsoon oo lagu waddo in maalinta Berri ah uu ka dhaco dibadbaxa ay kol hore ku baaqeen mucaaradka